လေ့လာမှုခရီးစဉ်အတွေ့အကြုံ | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan -toeictw.com
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan လေ့လာမှုခရီးစဉ်အတွေ့အကြုံ ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ပုံစံ - 7-4
လည်စည်းထဲမှာမရပ်မနားသင်တန်းနှစ်နှစ်ပြီးနောက်'s ကိုအစိုင်အခဲအင်္ဂလိပ်သင်တန်း,ကျွန်မတက္ကသိုလ်တတိယနှစ်တွင်မဝင်ခင်နွေရာသီအားလပ်ရက်ကာလအတွင်းလည်စည်းမှငါ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူဖိလစ်ပိုင်လေ့လာမှုခရီးစဉ်အပေါ်သွားလေ၏.ဒါဟာတစ်ဦးနှစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်-လအထူးကြပ်မတ်အင်္ဂလိပ်သင်ယူမှုနွေရာသီအစီအစဉ်ကို.နားထောင်တဲ့စီးရီးမှတဆင့်,သဒ်ဒါ,စာဖတ်ခြင်း,နှင့်ခံတွင်းလေ့ကျင့်ရေး,ကျွန်မသင်တန်း၏အဆုံးမှာ 62 နှင့်အတူ TOEFL IBT လွန်,အမေရိကန်ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှလျှောက်ထား၏အရည်အချင်းများရယူ.